४ दिनदेखि भोकै २ महिने सुत्केरी छोरो च्यापेर पैदल यात्रामा ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/४ दिनदेखि भोकै २ महिने सुत्केरी छोरो च्यापेर पैदल यात्रामा !
काठमाडौं : धादिङबाट ४ दिनको पैदल यात्रा पछि बुटवल हुँदै यति बेला गणेश विकको परिवार प्युठान सम्मको यात्रामा छ । लक डाउनका कारण गणेशको परिवार ४ दिनदेखि भो’क, तिर्खा, थकान केही नभनी हिँडेको छ । धादिङको इँटाभट्टामा काम गर्ने गणेश परियार २ महिने सुत्केरी श्रीमती, २ महिनाको छोरा, बुढा भएका बुबालाई लिएर घर हिँडेका छन् ।
इँटाभट्टामा काम ब’न्द भएपछि गणेश २ महिने छोरा काखमा च्यापेर घर हिँडेका हुन् । ‘साथमा भएको ३/४ हजार पनि सकिन थाल्यो । यो बेला श्रीमतीलाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउनु पर्ने बेलामा भोक लाग्दा खाना र तिर्खा लाग्दा पानीसमेत दिन सकेको छैन,’ भावुक हुँदै गणेशले भने । प्युठान पुग्न अझै ३ दिन लाग्ने भए पनि गणेशसँग बाटोमा आवश्यक पर्ने पैसा छैन । जसोतसो बाटोमा केही भेटिए खाँदै हिँड्ने गरेका छन् ।
इँटाभट्टाका करिब ३ सय मजदुर भट्टा ब’न्द भए पछि त्यहीँ अ’लपत्र परे । तर, उनी भने हिँडेरै घरसम्म पुग्ने अठोट लिए । ‘न राहत पाइने, न कसैले खान दिने, काम गर्ने ठाउँ नै ब’न्द भएपछि कसरी बस्नु, के खानु? म’रे पनि घरमै म’रूँला भनेर सुत्केरी श्रीमतीलाई लिएर हिँडेको हुँ,’ उनले भने । शिलापत्र डटकममा विकाश पराजुलीले लेख्नु भएको छ ।